Ruvara Runoita Kuti Uite Sei Uye Mavara Anorevei?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Paunotarira zvinhu zvakakupoteredza, maziso ako nepfungwa zvinoshanda pamwe chete. Unoona muchero uri pedyo wobva wafunga kana uchida kuudya. Unotarira kudenga wofunga kuti nhasi mvura hainayi. Unoona mashoko auri kuverenga iye zvino wofunga zvaanoreva. Chiripo ndechokuti ruvara ndirwo ruri kukubatsira. Sei?
Ruvara rwemuchero wawaona runokubatsira kuziva kana muchero wacho waibva uye uchiufarira. Ruvara rwedenga nemakore runokubatsira kuziva mamiriro ekunze. Sezvaunoverenga mashoko enyaya ino, maziso ako ari kuona zvakanaka pamusana pekusiyana kwakaita ruvara rwemashoko acho nerwepepa. Zvechokwadi, unogara uchishandisa ruvara kuti ukwanise kunzwisisa zvinhu zvakakupoteredza, kunyange zvazvo ungasazviziva. Asi ruvara rune zvimwewo zvarunoita kwauri.
ZVIMWE ZVINOITWA NERUVARA KWAURI
Sezvaunofamba mukati mechitoro, unenge wakapoteredzwa nezvinhu zvine mavara akasiyana-siyana zvakagadzirirwa kuti zvikutore mwoyo paunozviona. Vanoita zvokushambadzira vanonyatsosarudza mavara anokukwezva zvichienderana nokuti uri murume here kana kuti mukadzi uye zera rako. Vanogadzira zvinhu zvekushongedza mumba, vanosona zvipfeko, uye vanogadzira zvakasiyana-siyana vanozivawo kuti mavara anoita kuti vanhu vafarire zvimwe zvinhu.
Tsika dzakasiyana-siyana dzinoita kuti vanhu vasiyane pane zvavanoti zvinorehwa nemavara. Somuenzaniso, vanhu vokuAsia vanoti ruvara rutsvuku runoreva rombo rakanaka uye kupemberera, asi mune zvimwe zvikamu zveAfrica, runoshandiswa kana pafiwa. Zvisinei, vanhu vakangofanana pane zvavanoita zvichikonzerwa nemamwe mavara pasinei nemakuriro avakaita. Ngatimbokurukurai nezvemavara matatu tione zvaanogona kuita kwauri.
RUVARA RUTSVUKU runonyatsooneka zvakajeka. Runowanzotaurwa nezvarwo panenge pachitaurwa nezvesimba, hondo, uye zvinhu zvine ngozi. Runogona kuita kuti kugayiwa uye kushandiswa kwezvokudya mumuviri kuwedzere, munhu afemeruke, uye ropa riwedzere kupombwa.
MuBhaibheri, shoko rechiHebheru rinoshandiswa kureva zvinhu “zvitsvuku” rinobva pashoko rinoreva “ropa.” Bhaibheri rinoshandisa ruvara rutsvuku pakutsanangura nezvehure rinouraya rakapfeka nguo dzepepuru netsvuku rakatasva “chikara chitsvuku . . . chakazara nemazita okumhura.”—Zvakazarurwa 17:1-6.
RUVARA RWEGIRINI runoita kuti munhu aite zvakasiyana nezvinokonzerwa neruvara rutsvuku, nekuti runoita kuti zvokudya zvinonoke kugayiwa mumuviri uye runoita kuti munhu adekare. Ruvara rwacho runozorodza uye runowanzoshandiswa panenge pachitaurwa nezverunyararo. Tinonzwa kudekara patinoona magadheni egirini nezvikomo zvakasvibirira. Ruvara runozorodza urwu rwakambobvepi? Nyaya iri muna Genesisi yekusikwa kwakaitwa zvinhu inoti Mwari akapa vanhu uswa hwakasvibirira (kana kuti hwegirini) nezvinomera.—Genesisi 1:11, 12, 30.
RUVARA RUCHENA runowanzotaurwa nezvarwo panenge pachitaurwa nezvechiedza, kuchengeteka, uye kuchena. Runowanzobatanidzwawo neunhu hwakadai sekunaka uye kusava nemhosva. Ndirwo ruvara runonyanya kutaurwa nezvarwo muBhaibheri. Pazviratidzo zvakapiwa vanhu naMwari, vanhu nengirozi vanoonekwa vakapfeka zvichena, zvichiratidza kururama uye kuchena mune zvokunamata. (Johani 20:12; Zvakazarurwa 3:4; 7:9, 13, 14) Mabhiza machena ane vatasvi vakapfeka nguo chena dzerineni anomirira hondo yakarurama. (Zvakazarurwa 19:14) Mwari anoshandisa ruvara ruchena kuratidza kuti anoda kukanganwira zvivi paanoti: “Kunyange zvivi zvenyu zvikava somucheka wakati piriviri, zvichacheneswa sechando.”—Isaya 1:18.
RUVARA RUNOBATSIRA KUYEUKA
Kushandiswa kunoitwa mavara muBhaibheri kunoratidza kuti Mwari anonzwisisa zvinoitwa neruvara kuvanhu. Somuenzaniso, bhuku remuBhaibheri raZvakazarurwa rakafanotaura zviri kuitika mazuva ano zvinosanganisira hondo, nzara, uye nzufu dzinokonzerwa nekushaya zvokudya uye nezvirwere. Kuti tibatsirwe kuyeuka izvi, nhoroondo yacho inotaura nezvevatasvi vaiva pamabhiza ane mavara akasiyana.
Kutanga, pane bhiza jena, rinomirira hondo yakarurama yaKristu Jesu. Tinozoona bhiza dzvuku, rinomirira hondo pakati pemarudzi. Rinoteverwa nebhiza dema, rinomirira nzara. Tinobva taona “bhiza rakachenuruka; uye akanga akaritasva akanga aine zita rokuti Rufu.” (Zvakazarurwa 6:1-8) Ruvara rwebhiza rimwe nerimwe runogona kuita kuti tiite chimwe chinhu chinoenderana nezvinomirirwa nebhiza racho. Zviri nyore kuti tiyeuke mabhiza aya ane mavara akasiyana uye zvaanotidzidzisa nezvenguva yatiri kurarama.
MuBhaibheri mune mienzaniso yakawanda inoshandiswa mavara kutsanangura zvinhu. Zvechokwadi, Musiki wechiedza, ruvara, uye maziso emunhu, anoshandisa ruvara neunyanzvi pakudzidzisa zvinonzwisisika uye zviri nyore kuti vaverengi vayeuke. Ruvara runotibatsira kunzwisisa zvinhu. Ruvara rune zvarunoita kwatiri, uye runogona kutibatsira kuyeuka zvinhu zvinokosha. Ruvara chipo cherudo chakabva kuMusiki wedu kuti chitibatsire kunakidzwa neupenyu.
Pashure pokunge Noa nemhuri yake vabuda muareka, Mwari akavaratidza muraraungu waiva nemavara akasiyana-siyana sechiratidzo chevimbiso yake yokuti aisazomboshandisa mafashamo zvakare kuti aparadze vanhu. Vanofanira kunge vakaramba vachiyeuka chiratidzo chacho chaiva nemavara akasiyana-siyana uye chakanaka zvikuru. —Genesisi 9:12-17.
Vaya vanoti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka vanganetseka kuti nei vanhu vachikwanisa kuona mavara akawanda sezvo munhu achigona kurarama kunyange kana asingakwanisi kuona mavara akasiyana-siyana. Asi, kana tikabvuma kuti Musiki akatisika tichikwanisa kunakidzwa nokuona mavara akasiyana-siyana, tinobva taona chipo ichi serudo rwatakaratidzwa kuitira kuti tinakidzwe neupenyu.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ruvara Runoita Kuti Uite Sei?